इन्स्पेक्टर साहव २ वटा मारुती भेन र मोटरसाइकल कसलाई बेचियो ? | www.aagopati.com Websoft University
इन्स्पेक्टर साहव २ वटा मारुती भेन र मोटरसाइकल कसलाई बेचियो ?
बेलबारी ३१ भदौ । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा रहेका २ वटा मारुती भेन बिक्री भएको रहस्य खुलेको छ ।
बेलबारी–२, मा रहेको एक मारुती ग्यारेजमा कवाडीको मूल्यमा बिक्री भएपछि उक्त घटना बाहिर आएको हो । इप्रका बेलबारीका प्रहरी निरिक्षक मेघराज थापाले उक्त मारुती भेन बिक्री गरेको हो । बेलबारी इप्रकाका निरिक्षक थापाले २ हप्ताअघि भेन बिक्री गरेका हुन् । २०७२ सालका प्रहरी निरिक्षक दुर्गा दाहालको कार्यकालमा २ वटा भेन नियन्त्रणमा लिइएको थियो । ति २ वटै भेन चोरीको र कर छलि गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । २०७२ साल भदौ पहिलो साता तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक दुर्गा दाहालले बा.३ च ४१९३ नम्बरको मारुती भेन सुर्य श्रेष्ठले कुदाउँदै गर्दा बेलबारी–२ सिनेमा हल लाईनबाट नियन्त्रणमा लिएका थियोभने अर्को भेन २०७२ सालमा नै केवल तामाङको बा.१ ज १३५० को कालो प्लेटको गाडी उमेश ठाकुरलाई बिक्री गरेपछि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले मोरङबाट नियन्त्रणामा लिएर इप्रका बेलबारीलाई बुझाएको थियो । बा.३ च ४१९३ नम्बरको मारुती भेनलाई ४ वर्षको कर नतिरेको र राज्यलाई राजश्व ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियोभने बा. १ ज १३५० नम्बरको मारुती भेन भने बिराटनगरबाट ट्राफिकले जाँच गर्ने क्रममा ड्राइभर फरार भएपछि उक्त भेन नियन्त्रणमा लिएको तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक दाहालले टेलिफोन मार्फत जानकारी गराए ।
कसरी बिक्री भयो त गाडी ?
केही समयअगाडि इप्रका बेलबारीमा केन्द्रिय प्रहरी कार्यालयले भेट्रान (कार्यदक्षता) सम्बन्धी निरिक्षण गर्ने सुचीमा बेलबारी इप्रका परेको थियो । भदौ १३ गते उक्त निरिक्षण गर्ने मिति तय भएको थियो । बेलबारीका प्रहरी निरिक्षक मेघराज थापाले स्थानिय जनताहरुलाई बेलबारी इप्रका डिएसपी कार्यालय बन्नको लागि केन्द्रबाट निरिक्षण भैरहेको छ भनेर बिभिन्न ब्यापारी, उद्योगी र केही व्यक्तिहरुसँग चन्दा लिएर प्रहरी कार्यालयको रङ्रोगन गरिरहेका थिए । त्यसैबीचमा त्यस कार्यालयमा रहेका २ वटा मारुती भेन र केही मोटरसाइकलहरु पनि थापाले बिभिन्न ग्यारेजहरुमा बिक्री गरेको भनेर ग्यारेज वा केही प्रहरीहरुबाट सूचना आउने क्रम भैरहेको थियो । बेलबारीका ट्याक्सी स्टेण्ड र स्थानीय बुद्धिजिवीहरुबाट चन्दा आतंकको विषयमा स्थानीय पत्रकारहरुलाई समाचार प्रकाशनको लागि दबाब दिइ रहेका थिएभने टेक्सी स्टेण्डका केही सञ्चालकहरुले दिन दहाडै मारुती भेन र मोटरसाइकलहरु बिक्री भएको विषयमा जानकारी गराएपछि स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुको १ टोली इप्रका बेलबारीका प्रहरी निरिक्षकको कर्तुतको विषयमा पछि लागेको थियो ।
किन बेचे प्रहरी निरिक्षक थापाले गाडी ?
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक दुर्गा दाहालको पालामा २ वटा मारुती भेन चोरीको र राजश्व छलीको गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतीखेरै दाहालले कर कार्यालय र यातायात कार्यालयलाई पटकपटक गाडी नियन्त्रणमा लिएको विषयमा पत्रचार गरेका थिए । दाहालले यातायात कार्यालयलाई उक्त गाडी बुझ्नको लागि जानकारी गराएका थिए । यातायात कार्यालय, कर कार्यालय आफूहरुले केही दिनमा आएर उक्त मारुती भेनको विषयमा जानकारी लिने भन्दै आलटाल गर्दै दाहाललाई आउँछु भन्दै बताई रहेका थिए । दाहालले उक्त गाडी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउँन नपाउँदै उनको सरुवा भएको थियो । त्यहाँ पछाडि २०७३ मंसिर ७ मा प्रहरी निरिक्षकको रुपमा मेघराज थापाको बेलबारी इप्रकामा आगमन भएको थियो । उनले पनि केही समय सम्बन्धित कार्यालयका प्रहरीसँग जानकारी लिएका थिए । तर उक्त भेनहरु सम्बन्धित कार्यालयहरुले कार्वाही गर्न नमिल्ने भनेपछि उनको बुद्धिमा कुबुद्धि पलाउन थाल्यो । नभन्दै उनले २०७३ भदौमा बेलबारी–२ को एक ग्यारेजलाई २ वटा मारुती भेन कवाडीको मूल्यमा बिक्री गरेका थिए ।
कसरी थाहा भयो त बिक्री भएको गाडीको विषयमा ?
बेलबारी इप्रकाका प्रहरी निरिक्षक मेघराज थापाको तानासाहीप्रति उक्त कार्यालयका प्रहरीहरु असन्तुष्टि हुँदै आइरहेका थिए । त्यहाँ रहेका मुद्धा फाँट, प्रशासन फाँट, सञ्चार लगायत अन्य प्रहरी कर्मचारीहरु ऊसँग अति नै असन्तुष्टि भएका थिए । उनको गतिविधिप्रति कार्यालयका कर्मचारीहरु पूर्ण रुपमा असन्तुष्टि थिए । उनले यसभन्दा अघि पनि विभिन्न घटनाहरुमा मोटो रकम खाँदै घटनाहरु ढाकछोप गर्ने गरेको प्रहरीहरु बताउँदै आएका थिए । उनले को.३ च ४१९३ नम्बरको ९३ नम्बर मोडलको गाडी तत्कालीन बिजय शाहसँग सुर्य श्रेष्ठले रु. १ लाख मूल्यमा किनेका थिए । गाडी किनेको ६ महिना नभै तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक दुर्गा दाहालले राजश्व छलि गरेको अभियोगमा गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए । १३ महिना अघिदेखि गाडी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो रकम बिजय शाहसँग माग गरेका थिए । उक्त रकम शाहले श्रेष्ठलाई भुक्तान गरी सकेका थिए । २०७३ भदौमा स्थानीय ब्यापारी बिकाश श्रेष्ठलाई उक्त भेन दिएपछि प्रहरी थापामाथि श्रेष्ठ लगायत केही व्यक्तिहरु सशङ्कित भएका थिए । शाहले श्रेष्ठलाई प्रहरी हामीलाई चाहिन्छ प्रहरी निरिक्षक थापाले गाडी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्ने अरे मैले त दिए भन्दै सुर्य श्रेष्ठलाई शाहले बताएका थिए । त्यसको केही दिनपछि प्रहरी निरिक्षक थापाले गाडी श्रेष्ठलाई दिने विषयमा छलफल गर्न पटकपटक फोन सम्पर्क गरेका थिए तर श्रेष्ठ भने प्रहरी कार्यालय गएनन् । त्यसको केही दिनपछाडि गाडीहरु विकास श्रेष्ठलाई बेचेको भन्ने जानकारी उसकै बिक्रेता शाहबाट थाहा पाएको सुर्य श्रेष्ठले बताए । त्योसँगै डाँगीहाट–४ निवासी केवल तामाङको गाडी पनि थापाले श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थाहा हुन आएको छ । प्रहरी निरिक्षक थापाले २ वटा मारुती भेन १ लाख मूल्यमा श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको प्रहरी बताउँछन् । बेलबारी प्रहरीको अनुसार थापाले बिराटचोकका केही मोटरसाइकल ग्यारेजहरुमा पनि मोटरसाइकलहरु कवाडीको मूल्यमा बिक्री गरेको बताउँछन् । थापा पैसाको मामलामा एकदमै घुस्याहा प्रहरी निरिक्षकमा पर्दछन् । यस विषयमा ग्यारेज सञ्चालक विकाश श्रेष्ठसँग जानकारी लिदा आफूलाई सम्बन्धित गाडी धनिहरुसँग मिलाएर गाडी लिन आग्रह गरेपनि आफूले नकिनेको जिकिर गरे तर प्रहरी निरिक्षकसँग सम्पर्क गर्दा केन्द्रीय कार्यालयको भेट्रानको टोली आउने भएकोले आफूले उक्त गाडी र मोटरसाइकलहरु सम्बन्दित ग्यारेजहरुमा लगेको भन्दै आलटाल गरे । उक्त ग्यारेजहरुमा गाडीको सिट खोलिनेको साथै केही सामग्रीहरु निकालिएको छभने नम्बर प्लेटहरु हटाइएको छ । मोटरसाइकलको पनि पार्टपुर्जाहरु झिकिएको छन् भने केही मोटरसाइकलका नम्बर प्लेट हटाइएको अवस्थामा राखिएको छ ।